Fikarohana momba ny firaisana Tranom-pitaovam-panjakan-dRahely ao Lugdi Chaubey | Shanti Devi Mathur sy ny Orb phenomenon - Fikarohana momba ny fanambadiana vatana
Mpikaroka: Vaomieran'ny Kaomity notendren'ny Mahatma Gandhi
From: Velona talohako: Ny tena tantara momba ny fanambadiana indray ao Shanti Devi by Sture Lonnerstrand
Ny fiainana sy ny fahafatesan'i Lugdi Devi
Lugdi Devi, izay midika hoe "loko any an-danitra", dia teraka tamin'ny 18 1902, 15 tao an-tanànan'i Mathura, fantatra koa amin'ny mponina any Muttra, izay misy XNUMX kilometatra atsimon'i New Delhi. Ny anaran'ny rainy dia Chaturbhuj ary ny anaran-dreniny dia Jagti Devi.
Lugdi dia tovovavy feno fankasitrahana izay nivavaka tamin'ny andriamanitra Hindu Krishna. Muttra dia heverina ho tanànan'ny Krishna sy ny Tempolin'i Dvarkadish izay naorina tao amin'ny voninahitra Krishna.
Raha efa antitra izy dia nanambady, ny rainy, Chaturbhuj, izay mahantra, dia nitaky trosa mba hanomezana vidy ampy ho azy hanambady olom-pirenena mpanankarena, Kedar Nath Chaubey. Kedar dia Brahmin, mpikambana ao amin'ny caste avo indrindra any India.
Lugdi sy Kedar dia nanambady nandritra ny fetiben'ny Navaratri tao Muttra. Kedar dia nanana zanak'olo-kely atao hoe Kanji Mal Chaubey, izay niara-nonina tamin'ny mpivady.
Lahy bevohoka i Lugdi. Nanan-janaka be izy ary nalahelo be nandritra ny vanim-potoan'ny fitondrana. Tamin'ny volana 25, 1925, dia nitera-dahy iray ilay mpivady antsoina hoe Naunita Lal Chaubey. Nisy fiantraikany tamin'ny fitondrana vohoka ary tamin'ny volana 4, 1925, dia maty i Lugdi.
Ludgi Reincarnates ho Shanti Devi Mathur
Efatra ambin'ny folo volana taty aoriana taorian'ny nahafatesan'i Lugdi dia zazavavy teraka tany New Delhi. Ny reniny dia Prem Pyari Mathur ary ny rainy dia Rang Bahadur Mathur. Nantsoin'ny mpivady hoe Shanti Devi Mathur ny zanany vavy.
Taorian'ny fahaefatra nahaterahany fahaefatra dia nanomboka niresaka momba ny fiainan'ny vadiny taloha i Shanti. Hoy izy: "Rahalahy Brahmin avy any Muttra aho." Nolazainy fa niandry azy tany Muttra ny vadiny.
Tahaka ny tranga fahatsiarovan-tena tamin'ny fahazazany tany am-boalohany, dia nilaza tamin'ny ray aman-dreniny izy fa tsy ity no tena tranony. Nanampy izy fa ny akanjo anaovany dia tsy ny fitafiany tena izy.
Ankoatra izany, dia nilaza tamin'i Prem i Shanti fa "tsy ianao no tena mama" ary "tsy mijery azy ianao." Na dia tsy mandokoditra aza ny fianakaviany dia nilaza tamin'ny ray aman-dreniny fa "any Muttra dia tsy mihinan-kena isika." Nilaza izy fa tsy mety ny mamono biby. Nilaza izy fa te-hisakafo "sattvic". Tsy fantatry ny ray aman-dreniny ny fomba nahafantarany an'io teny io, toy ny tsy nampiasainy mihitsy. Ny sakafo sattvic dia tratra raha tsy manimba ny zavamananaina sy toy izany, dia sakafo vejetary. Ny sakafo sattvic ihany no azo ekena ho fanatitra ho an'ireo andriamanitra Hindou.
Shanti dia nanana namana izay kambana, nantsoina hoe Prabhash sy Subhash. Ny rainy dia mpisolovava, Tara Chand Mathur. Rehefa niaraka tamin'ireo kambana i Shanti dia naka sarin'ny tempoly izy. Nanamarika i Prabhash fa tsy toy ilay tempoly teo amin'ny manodidina azy izany. Namaly i Shanti fa nitondra ny Tempolin'i Dvarkadish tao Muttra izy. Nampiany fa ny vadiny dia manana fivarotana lehibe eo akaikin'io tempoly io.
I Shanti no manambara ny fiainany taloha
Nitantara i Shanti fa nandihy tamin'ny vadiny izy rehefa nanao akanjo jambany, izay antsoina hoe chureys. Nolazainy fa niaina teny an-dalambe izy ireo taorian'ny fonenan'ny vadiny, indrindra fa ny trano fahasivy tao amin'ny làlan'i Chaubey ao Muttra. Nilaza ihany koa izy fa ny anarany dia tsy Shanti Devi, fa i Lugdi Devi. Rehefa valo taona izy, dia nanambara i Shanti fa ny anaran'ny vadiny taloha dia i Kedar Nath. Nolazainy fa nandritra ny fiainany taloha, ny anaran-drainy dia Chaturbhuj ary ny anaran-dreniny dia Jagti.
Amin'ity adiresy ity, ny 9 Chaubey Street, ny anarana niainan'i Lugdi Devi Chaubey sy ny anaran'ny vadiny taloha nataon'i Kedar Nath Chaubey, dia nisy ny fomba fikarohana momba ny fiainana taloha nataon'i Shanti.
Ny talen'ny sekoly izay nanatrehan'i Shanti, Lala Kishan Chand no anarany, ary ny mpampianatra iray, Bishan Chand, dia nandre ny filazany fa manana vady any Muttra izy. Nanatsoaka hevitra izy ireo fa ny fanambaran'i Shanti dia miresaka momba ny fiainana taloha. Lala Kishan Chand dia nandray andraikitra hanoratra taratasy ho an'i Kedar Nath Chaubey ao amin'ny 9 Chaubey Street any Mattra momba io fomban-kevitra io.
Shanti's Life Life Husband dia nandefa iraka
Nahazo valisoa tamin'ny nahazoany valiny avy amin'i Kedar ny mpitantana tompon'andraikitra fa nanana vehivavy iray antsoina hoe Lugdi Devi izy ary manana tranombarotra akaikin'ny tempoly Dvarkadish, araka ny nitateran'i Shanti. Nanazava i Kedar fa manana havan-keloka any New Delhi izay anarany i Kanji Mal Chaubey, izay nosoratany hanontany hoe ny Kanji dia hihaona amin'ity zazavavy ity izay milaza fa vadiny vadiny vaovao.
Raha mbola valo taona i Shanti dia nandeha nitsena azy tany an-tranony tany New Delhi i Kanji Mal Chaubey. Raha vantany vao niditra tao an-trano izy, dia nilaza i Shanti hoe: "Vadin'ny vadin'ny vadiko ianao."
Nanampy i Shanti fa Kedar dia vadiny ary mpandraharaha ao Muttra izy. Nolazainy tamin'i Kanji fa niara-nonina taminay i Lugdi Devi. Niatrika olana ianao tamin'ny fiezahana hitady trano tianao ary izany no antony tianao hijanonana miaraka aminay. Mbola tsaroako hatramin'izao. Tsy te hiasa amin'i Kedar ianao satria te hahaleo tena. Marina izany rehetra izany.
Nanontany i Kanji avy eo, firy ny rahalahy nanambady. Namaly i Shanti avy eo fa ny vadiny ihany no manana rahalahy iray, izay marina. Nanontany i Kanji raha zokiny na zandriny kokoa noho i Kedar. Namaly azy i Shanti, izay marina.
Nilaza i Shanti avy eo fa tadidiny ny anarany, Kanji Mal Chaubey, izay marina. Notantarain'i Kanji avy eo fa tonga hihaona amin'i Shanti ho toy ny olona tsy mino izy fa mpino ankehitriny. Nanoratra tamin'i Kedar zanak'olo-mpiray tam-po aminy izy, hitsidika an'ity zazavavy ity.
Ny vadin'i Shanti taloha dia tonga niaraka tamin'ny fieritreretana
Niala tany Muttra nankany New Delhi i Kedar mba hihaona amin'i Shanti, fa mba hitsapana azy, dia nanapa-kevitra ny handeha ho azy izy. Rehefa niseho tao amin'ny trano Mathur izy dia nampahafantatra ny tenany ho Ram Chaubey, zaodahin'i Kedar.
Fantatr'i Shanti anefa izy ary nilaza fa izy no Kedar Nath Chaubey. Taorian'izany, nisy ankizilahy iray niditra tao an-trano. Fantatr'i Shanti fa zanany lahy izy taloha. Nolazainy fa ity no zanako, i Naunita Lal malalako. Taorian 'ny fotoana fialan-tsiny sy fandavana an' i Shanti dia nody i Naunita ary nanaiky izy ireo.
Nanontany àry i Shanti raha nitazona ny fampanantenany taminy i Kedar. Nanontany izay nampanantenainy i Kedar. Namaly i Shanti hoe: "Nampanantena anao aho fa tsy hanambady intsony ianao rehefa maty aho." Niaiky i Kedar fa tsy afaka nankatò io voady io izy.
Shanti dia mampahatsiahy ny tsy firaharahiana ny fiainana an-davanandro sy ny toe-piainana manokana
Niteny tamin'i Kedar avy eo i Shanti hoe ahoana no nahatsiarovany ny fomba namadihany azy. Rehefa niaritra ny fitondrana vohoka tamin'ny Naunita Lal izy, dia nahatsikaritra fa ny mpitsabo izay nokaramaina hikarakara azy toa i Lugdi dia nanana fifankatiavana tamin'i Kedar vadiny. Na dia teo aza ny fantsom-boalohany teo an-tongony, izay nahatonga azy ho sarotra ny nandeha, dia vitany ny niala ny efitranony ka nahita an'i Kedar sy ilay mpitsabo mpanampy nifamihina tao amin'ny efitrano hafa.
Gaga i Kedar fa fantatr'i Shanti io fisehoan-javatra io ary nanontany an'i Shanti ho famelan-keloka. Kedar, henatra, nanaiky fa marina izany.
Nanambara i Shanti fa tsaroany fa fony mbola bevohoka sy nalahelo be izy, dia mbola te hanao firaisana aminy i Kedar. Nolazain'i Shanti izany fa noho ny tsy fahafaham-po, afaka nanao firaisana amin'ny toerana iray manokana izy ary saika nanery an'i Kedar teo aminy. Nalahelo i Kedar ka nanontany hoe: "Ahoana no ahafantaranao an'izany?" Rehefa avy nanambara ny fahatsiarovany an'ilay mpitsabo mpanampy sy ny toerana manokana i Sex, dia nangataka ny famelan-keloka tamin'i Shanti indray i Kedar.
Mahatma Gandhi Manangana sehatra iray hikaroka ny raharaha Shanti Devi Reincarnation
Mahatma Gandhi nandre momba ny raharaha taloha momba an'i Shanti Devi Mathur ary nandeha nitsidika azy tany New Delhi. Hetsika mahagaga izany raha tonga tao an-tranon'ny fianakaviana Mathur i Gandhi. Namporisika an'i Shanti i Gandhi mba hivezivezena any Muttra miaraka amin'ny tontolon'ny lehilahy, anisan'izany ilay mpisolovava, Tara Chad Mathur, hanadihady ity tranga ity.
Shanti dia Namerimberina Namana ny Fiainan'ny Fiainana Taloha tao Muttra
Tamin'ny 25 Novambra 1935, antokon'olona 15 avy any New Delhi dia niara-dia tamin'i Shanti, izay mbola valo taona, nankany Muttra. Tao amin'ny lampihazon'ny fiaran-dalamby tao Muttra, dia nahafantatra lehilahy lehibe iray i Shanti, nihazakazaka nanatona azy ary namihina ny ranjony. Nolazainy tamin'ny fety fa ny rahalahiny dia zaodahin'izy io fony izy Lugdi. Nanontany an-dralehilahy izy raha nikarakara ny zavamaniry basil masina, araka ny efa nampanantenainy. Ilay lehilahy nitantara izany dia Ram Chaubey, zaodahin'i Lugdi ary tena nampanantena tokoa izy fa hikarakara ny zavamaniry Lugdi alohan'ny hahafatesany.
Nanomboka nitarika ny vondrona ho any amin'ny fiainany taloha i Shanti. Nanafaka taxi maromaro ny vondrona ary rehefa nanao ny lalany ny mpandeha, dia nijanona teo akaikin'ny làlana ety miaraka amin'ny hazo i Shanti, ka nilaza fa afaka mandeha eny izy ireo. Manazava i Shanti fa handeha ho any amin'ny trano voalohany izay niainan'i Lugdi sy Kedar fony izy ireo vao nivady.
Teny an-dalana, niaiky ny lehilahy zokiolona iray hafa i Shanti, nihazakazaka nanatona azy ary nanoroka ny tanany. Nanazava tamin'ilay vondrona izy fa ity no rafozan-tranon-drainy Mahadev Chaubey. Hoy izy taminy: "Ianao io, babu Mahadev, izay nanome ahy ny karavatiko, ny akanjo boriboriko. Tadidinao ve? Hoy ianao hoe: 'Hankalaza ny voninahitr'i Krishna izy, mangovitra toy ny gopi izy, iray amin'ireo zazavavy madio izay tia an'Andriamanitra.' Nankasitrahako ny dihy nataoko. "
Mahadev dia nanaiky hoe, "Ireo no teniko manokana. Dia niverina ianao, Lugdi Devi. Isaorana anie ny Tompo. "
Fahatsiarovan-toerana: Shanti dia mahita ny fiainam-piainany taloha
Nihazakazaka teny an-dalana i Shanti ary faly ery nitantara fa teo akaiky teo ny fiainany taloha ary lasa mavo. Rehefa tonga tao an-trano izy, dia diso fanantenana izy fa fotsy ny trano fa tsy mavo. Nisokatra ny varavarana ary niditra tao an-tsainy i Shanti. Tao anaty, manazava ny lehilahy iray fa manofa trano ity avy any Kedar Nath Chaubey izy. Rehefa nipetrahana voalohany tao an-trano izy ireo, dia mavo ny volony, saingy nosoratan'izy ireo ny fotsy ivelany tamin'ny vidiny. Nasehon'i Shanti avy eo ny vondrona misy ny efitranony sy ny efitranon'ny vadiny ary ny toerana misy ny fandriany. Ny mpikarakara dia nitatitra fa rehefa nijery voalohany ny trano izy ireo dia nahatontosa ny efitranon'ireo efitrano ireo ary ny filazalazana an'i Shanti dia marina.
Ny vondrona dia nandeha nankany amin'ny 9 Chaubey Street, toerana izay niainan'i Kedar sy Lugdi tamin'ny fotoana nahafaty an'i Lugdi. Tao amin'io arabe io dia nihazakazaka nankany amin'ny tovolahy iray i Shanti ary nilaza hoe: "Ny rahalahiko izany. Nuthura Nath. "" Izaho sy ny anadahiko dia samy nitovy daholo "Hoy izy taminy:" Tezitra ianao rehefa nieritreritra ny olona hoe toy ny anabavinao ianao, tadidinao ve? "
Nisikina ilay tovolahy ary nanontany azy raha fantany ny anaran'ireo rahalahy roa hafa. Namaly an'i Shanti i Vitaly Nath sy Ayodhya Nath.
Raha nanatona ny 9 Chaubey Street izy ireo dia hoy i Shanti: "Tany aho no nandany ny fotoana mahafaly indrindra teo amin'ny fiainako, fa ny tena sarotra indrindra. Narary mafy aho. "
Kedar sy ny vadiny vaovao, ary koa Naunita Lal, zanakalahin'i Lugdi, dia niandry tao anaty trano. Nanoroka ny zanany taloha i Shanti. Niakatra rihana izy avy eo ary nahita fa foana ilay efitrano nalainy taloha. Fantany tsara ny toerana nisy ny fandriany taloha. Nampahafantariny koa ny toerana miafina ao ambanin'ny gorodona izay nanafenany vola, nefa hitany fa very ny vola. Nanazava i Kedar fa nampiasa ny vola izy mba handoavana ny fandevenana an'i Lugdi.
Tahaka ny Dalai Lama, i Shanti dia mamaritra izay fananany taloha
Nangataka ny firavany i Shanti. Naka biriky firavaka i Kedar ary i Shanti dia nanomboka namaritra ny azy, tahaka an'i Lugdi, ary ny an'ny vadin'i Kedar vaovao. Avy eo izy dia nanapa-kevitra ny hampiseho ny vondrona izay tena nampiasainy nandritra ny fiainany teo aloha teo an-tokotanin'ny trano. Nanondro ny tokotanin'ny tokotany izy saingy tsy nisy tsara. Nitatitra i Kedar fa teo ny fantsakan-drano, fa ny rano kosa dia voapoizina ary napetraka ny lavaka.
Shanti dia manaiky ny ray aman-dreniny
Niantso ny fiarakaretsaka avy eo ny antoko mba handray tao amin'ny Tempolin'i Dvarkadish. Teny an-dalana, niondrika teo akaikin'ny rindrina fotsy i Shanti ary nivoaka ny trano, nahita tranokely iray izay nitarika tany amin'ny zaridaina lehibe tao ambadiky ny rindrina i Shanti. Nanazava i Shanti fa tany an-tranony izy. Tao amin'ny zaridaina nisy ny fety ny olona. Nihazakazaka nankany amin'ny vehivavy zokiolona i Shanti, izay lasa renin'i Lugdi. Niantso izy hoe: "Mama, Mama, Jagti Devi. Lugdi Devi, zanakao vavy izany. "
Hitany avy eo ny ray aman-dreniny taloha, Chaturbhuj. Nolazain'i Shanti taminy fa mahantra izy ary naka trosa mba hanomezana vidy ampy azy hanambady an'i Kedar Nath Chaubey. Chaturbhuj nanamafy fa marina izany. Taorian'ity fihaonana ity niaraka tamin'ny ray aman-dreniny taloha, dia mbola nitohy tao amin'ny tempolin'i Dvarkadsih i Shanti sy ilay antoko izay niarahaba azy ireo.
Farany, ny Vaomieran'ny Fanadihadiana dia namintina fa ny raharaha momba ny fanambadiana indray ao Lugdi Devi Chaubey | Shanti Devi Mather dia olona iray manan-kery, iray izay neken'i Mahatma Gandhi.
Fahatsiarovan'i Shanti ny elanelam-potoana nisy teo amin'ny fahafatesana sy ny fahaterahana indray
Shanti Devi dia nanadihady ny mpanao gazety Soeda Sture Lonnerstrand, izay nanoratra ny boky ity lahatsoratra ity. Nitantara taminy i Shanti fa nahatsiaro izay nanjo azy taorian'ny nahafatesan'i Lugdi Devi Chaubey. Nanambara i Shanti fa nahita dokotera sy mpitsabo mpanadihady nandinika ny vatany izy mba hanamarina fa maty izy. Nilaza izy fa te hanoroka ny vavany i Kedar saingy nosakanan'ny dokotera izy.
Nanazava izy fa fantany fa naverina tany amin'ny trano nipetrahany ny vatany, ary nokasaina tamin'ny sehatra sy lambam-pandriana, voaravaka voninkazo ary nentina teo amin'ny tsangambato vita amin'ny bao. Nofehezin'i Kedar avy eo ny kitay, mba ho fatin'ny vatan'i Lugdi. Tamin'izany fotoana izany dia nilaza i Shanti fa mahatsapa ny fahazavana tsy manam-petra izy.
Taorian'izany, nilaza i Shanti fa nahatsiaro maimaim-poana izy ary nihanihena kely tahaka ny vovoka. Nolazainy fa toy ny hoe mikarama izay mikitroka manodidina azy izy, nefa tsapany fa ao anatin 'ity izao rehetra izao izao tontolo izao. Nolazainy fa ny fampodiana azy rehetra dia hita ao anatin'io mikraoba bitika io.
Nolazainy fa niverina tao anatin'ny endrika mifantoka ny fahatsiarovany rehetra ary dia naniry mafy ny ho tonga vehivavy indray izy. Nitsahatra ny traikefa momba ny fitsangantsanganana rehefa nahatsapa fa nokaravasina tamin'ny zavatra iray, izay tsapany tatỳ aoriana dia ny kibo. Nanomboka ny fahatongavany ho teraka i Shanti.
Ny Phenomenon of the Ghost Being Orbs
Ny mahaliana, ny fanoritsoran'i Shanti ny hoe lasa kely, toy ny mikraoba, dia toa mifandraika amin'ny sarin'ireo zavatra sobika ankehitriny izay nalaina tao amin'ny kamera nomerika antsoina hoe org. Na dia misy orana aza ny rotsak'orana na ny rano, dia tsy ny taratra rehetra ihany no afaka hazavaina amin'ireto vokatra tsara ireto.
Amin'ny asako miaraka amin'ny Kevin Ryerson, izay manasongadina fanahy malaza antsoina hoe Ahtun Re, Nanontany momba orb aho. Ahtun Re dia nilaza tamiko fa ny tena kanto dia tena fisehoan'ny fanahy, ny zavatra ao amin'ny filôzôfia samihafa dia antsoina hoe bindu na ny atoma maharitra fanahy iray. Ny filazan'i Shanti momba ny felam-boly toy ny mikraoba madinika, mahatsiaro ny fifandraisana amin'ny zavamananaina rehetra, dia mety ho toy ny orana ara-panahy. Raha te hianatra bebe kokoa momba ny orbs, azafady mankany:
Ny Orb phenomenon
Fahatsiarovana jeografika: Raha tsy nisy bitsika, nandritra ny fitsidihany voalohany an'i Muttra, dia afaka nitarika ny Comité de inquiry tamin'ny alàlan'ny trano fonenany tany an-tranony i Shanti, ny trano voalohany niainany niaraka tamin'i Kedar sy ny trano niainany tamin'ny fotoana nahafatesany.
Fanahy Masina ao amin'ny Firaisana ara-nofo any am-parany: Namariparitra ny traikefany tany amin'ny tontolon'ny fanahy i Shanti taorian'ny nahafatesan'i Lugdi ary talohan'ny nahaterahany an'i Shanti.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Niaraka tamin'ny fianakaviany i Lugdi tamin'ny alàlan'ny fahoriany ho Shanti.